MMEMXBARA N’IGBO - PROJECT TOPICS AND FREE PROJECT MATERIALS
Home / Linguistics and Languages final year complete project topics and materials / MMEMXBARA N’IGBO
MMEMXBARA N’IGBO quantity
1.1 Ntqala Nchqcha
Asxsx mmadx niile nwere usoro d[ iche iche ha na-agbaso were egosipxta ihe kar[r[ otu. Nke a pxtara ihe nke qma n’igosipxta nd[iche d[ n’etiti mkpqolu na xbara na etu ha si metxta mkpqaha. Ihe nke a pxtara bx na ebe q bxla e nwere qnx qgxgx kar[r[ otu na q na-egosipxta mmemxbara. Qnx qgxgx bx otu n’ime katigori xtqasxsx a chqpxtara n’oge ntqala xtqasxsx. Qnx qgxgx pxrx iche nke ukwuu maka na q na-enye aka [kqwa qrx d[ iche iche q na-arx n’usoro ederede xtqasxsx. N’agbanyegh[ na asxsx niile d[ iche iche nwere usoro d[ iche iche ha si egosipxta qnx qgxgx, xfqdx n’ime usoro nd[ a bx nke e lebara anya n’qmxmx ha n’usoro qmxmx ihe asxsx nd[ ‘India na Yurop’ maka na o teela ha malitere ide maka akxkq ala ha. N’asxsx nd[ a niile, ha nwere qtxtx nchqcha e meelara n’xtqasxsx ha iji kqwapxta nke a.
A b[azie n’asxsx nd[ qzq d[ ka nke nd[ Afr[ka, ihe gbasara [kqwapxta qnx qgxgx gbasoro nke asxsx nd[ India na Yurop. Nke a bx maka na ha bx nd[ mb[ara-ch[a n’imirikiti akxkx Afr[ka, nke a mere ha jiri gbasoo qmxmx ihe nke yiri nke ha. N’ihi nke a, qmxmx ihe xfqdx gbasara asxsx nd[ Afr[ka anagh[ akqwapxta n’uju ma q bx nke qma gbasara asxsx ha. Agwara nd[ a, nd[ nke a kqwapxtagh[ nke qma n’asxsx Afr[ka, na ar[qz[ ka a gbatara ha qsq enyemaka, ka e wee mara nke bx eziokwu gbasara ha. Otu n’ime agwara nd[ n’Igbo bx qnx qgxgx maka na a kqwatabegh[ ya nke qma. Q bxrx na e gee nt[ nke qma mgbe onye Igbo q bxla na-asx asxsx Igbo, site na mmas[ o nwere n’amxmamx sayensi asxsx n’ihe gbasara mmemxbara, q ga-achqpxta na e nwere nnqq xzq d[ iche iche e ji egosipxta xbara ma q bx ihe kar[r[ otu. Ihe kpatara odee ji eme nchqcha n’isi okwu a bx na xfqdx nd[ na-asx Igbo na-ekwuhie ihe gbasara xbara mgbe ha na-akpa nkata. Oge xfqdx nd[ mmadx na-as[ “Agwazila m okwu ka xmx aka” kama [s[ “Agwazila m okwu ka nwata”. Qzq qtxtx nd[ qka mmxta n’asxsx Igbo azqqla qkpa dike n’ide edemede gbasara xtqasxsx mana ha edebegh[ Igbo. Nkqwapxta nd[ degoro ede n’isiokwu a ezuchabegh[ oke. Nke ka nke bx na qtxtx nd[ degoro ya ede jikar[r[ asxsx Bekee dee ya. Qzqkwa odee chqrq itule agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo, xzq mmemxbara d[ iche iche n’Igbo, mmemxbara okwu nnqrqonwe na ndabe, qrx xdaolu na mmemxbara na mmemxbara na ngwaa Igbo.
Asxsx, d[ ka any[ mara, d[ oke mkpa na ndx mmadx. Q bx asxsx ka mmadx ji d[ iche n’ebe anxmanx nd[ qzq d[. Mmadx na-eji ya akpar[ta xka n’xzq pxrx iche kar[a anxmanx. Mmadx nwere amamihe na uche ma na-echekwa echiche. Q bxrx na asxsx ad[gh[, amamihe na echiche niile mmadx chere ga-atq ya n’obi n’ihi na o nweghi xzq q ga-esi mee ka nd[ mmadx mata ihe d[ ya n’ime mmxq.
Q bx asxsx ka any[ ji ede ihe mmadx nwere ike [gx ma q bx gxq nke onye qzq dere. Q bx site n’asxsx ka xfqdx omenala any[ ka ji d[r[ qkpx tqqrq qkpx. N’ihi nke a, q d[ mkpa ka onye q bxla na-echekwaba asxsx ya n’ihi na onye kpqq qba ya mkpqkqrq, agbata obi ya ewere ya kpoo ntx. Nchekwebe asxsx d[ oke mkpa maka na q bx nkx d[ na mba na-eghere mba nri.
N’agbanyegh[ uru nd[ a niile asxsx bara, qmxmx asxsx Na[jir[a txmad[ asxsx Igbo bx nnqq ihe nd[ mmadx, gqqment[ na nd[ na-eme nchqcha na-eleda anya nke ukwuu. A na-enwekwa qtxtx ihe nkatq n’[kwa emu site n’aka qtxtx mmadx nd[ kwenyere na o nwegh[ uru/mkpa q baara mmadx [mx asxsx a mxnyere ya na ya. Ha na-ajx ajxjx d[ otu a. A na-agx Igbo agx? N’ihi nke a, qchqcha chqpxtara na e mebegh[ qtxtx nchqcha maka mmemxbara n’Igbo. Xfqdx nd[ mere ya ji asxsx Bekee mee ya.
Nsogbu nchqcha a bx [mata usoro d[ iche iche e si emebexbara n’usoro okwu Igbo, agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo, mmemxbara okwu nnqrqonwe na ndabe, qrx xdaolu na mmemxbara nakwa mmemxbara na ngwaa Igbo.
1.3 Mbunuche Nchqcha
Mbunuche nchqcha a bx ileba anya na mmemxbara d[ ka o si metxta usoro okwu Igbo. Mbunuche nchqcha a bx ileba anya na agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo; xzq mmemxbara d[ iche iche n’Igbo; q ga-elebakwa anya na mmemxbara okwu nnqrqonwe na ndabe, qrx xdaolu na mmemxbara nakwa mmemxbara na ngwaa Igbo.
1.4 Oke Nchqcha
Nchqcha a gbadoro xkwx n’Igbo izugbe d[ ka Igbo e ji eme amxmamx Igbo n’xlq akwxkwq tinyere na ngalaba Lingwistiks. Nchqcha a gbadoro xkwx n’atxtx xtq asxsx izugbe nke Chomsky wepxtara. Mmemxbara a bx naan[ n’xtqasxsx ka odee gbadoro xkwx ime nchqcha ya n’agbanyegh[ na e nwere mmemxbara n’olu nd[ d[ iche iche. Ihe nchqcha a ga-abagide bx [txle
agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo
xzq mmemxbara d[ iche iche n’Igbo
mmemxbara okwu nnqrqonwe na ndabe
qrx xdaolu na mmemxbara.
mmemxbara na ngwaa Igbo.
Site na mbunuche nchqcha a, a gbara ajxjx nd[ a iji chqpxta xsa ha na nchqcha a. Ajxjx nchqcha nd[ a gxnyere:
Kedu agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo.
kedu xzq mmemxbara d[ iche iche e nwere
kedu nd[ bx mmemxbara nnqrqonwe na mmemxbara ndabe
G[n[ bx qrx xdaolu na mmemxbara.
kedu mmemxbara nd[ e nwere ike isi na ngwaa Igbo mepxta.
Nchqcha a ga-enye aka kqwapxta agwara mmemxbara na mkpqolu n’Igbo. Q ga-enyekwa aka igosipxta xzq mmemxbara d[ iche iche e nwere ma kqwapxtakwa mmemxbara nnqrqonwe na mmemxbara ndabe.
Nchqcha a ga-ezipxtakwa qrx xdaolu na mmemxbara. Q ga-enyekwa aka [mata mmemxbara e nwere ike isi na ngwaa mepxta n’Igbo. Nchqcha a ga-ad[ ka ihe nlere anya nye nd[ qzq nwere mmas[ na nchqcha n’qmxmx xtqasxsx Igbo na asxsx nd[ qzq. Nd[ ga-erite elele na nchqcha a bx xmx akwxkwq nd[ nq ogo sekqnd[r[, kqleji nke Edukeshqn nakwa mahadum nwere mmas[ maka qmxmx asxsx Igbo. Nd[ qba akwxkwq ga-eritekwa elele na nchqcha a maka na nchqcha a ga-enye aka [kwalite akwxkwq nrxmaka ha ga-enwe. Nd[ gqqmenti ga-eritekwa elele na nchqcha. Nchqcha a ga-enyekwa aka [kwalite qmxmx asxsx Igbo ka o rue ogo amxmamx asxsx nd[ qzq d[ ka asxsx Bekee.
1.7 Nh[amahx Nchqcha
Nh[amahx nchqcha a bx na qtxtx ihe e derela gbasara mmemxbara bx asxsx bekee ka e ji dee ya. N’ihi nke a, [sxghar[ ederede nd[ ahx n’asxsx Igbo ad[chagh[ mfe. Nd[ qka mmxta edeela qtxtx akwxkwq n’xtqasxsx Igbo nke xmx ama ala Igbo na-ekpupuru okpu, mana qtxtx akwxkwq a elebagh[ anya n’qmxmx mmemxbara n’uju. Nke a mere na akwxkwq Igbo ga-enye aka na nchqcha a ad[gh[ qtxtx ma e wepu nd[ amxmamx asxsx Igbo ole na ole merela nchqcha n’Igbo n’ikpeazx a. Otu q bxla o si d[, nh[amahu nd[ a bx nke a gabigara site n’enyemaka onye nduzi nchqcha a nakwa akwxkwq ole na ole odee nwetara. Odee gbakwara qtxtx nd[ mmadx ajxjx qnx.
ISI NKE ABXQ
N’isi nke abxq a, a ga-eleba anya n’atxtx nchqcha, ntxleghar[ nchqcha, nchqcha e meerela n’isi okwu na nch[kqta ntuleghar[
2.1 Atxtx Nchqcha
E nwere qtxtx atxtx mana nchqcha a ga-agbaso atxtx xtqasxsx izugbe. Onye wepxtara atxtx a bx Noam Chomsky n’afq 1981. Lyons (1981) kqwara na atxtx xtqasxsx izugbe malitere na mbx na senchuri iri na atq gara aga, mechaa b[akwa qzq na senchuri iri na asatq. Lyons